Hadalkii Cabdiqaadir lugadheere oo qabiilooyinka galjecel iyo biyomaal ka xanaajiyay
Waxaa si caro leh hadal uga soo saaray degmooyinka Jilib iyo jammaame waxgarad iyo odayaal matelaya beelaha gaaljecel iyo biyomaal kuwaasoo ka biyo diiday hadalkii Cabdiqaadir lugadheere ee ahaa in beesha shiikhaal ay degmooyinka jilib iyo jamaame 75% degto, taasoo ay ku tilmaameen nin riyoonaya oo aan jihooyinka kala garanayan.
Caaqil Salaad iimaan Yarow oo uhadlayay beesha gaaljecel,Iyo Muqtaar Muumin Maxamed oo uhadlayay beesha biyo maal ayaa yiri shiikhaal waxaan ku ogayn inay tuulada Xaramka deegaankeedu yahay ee goormay jilib iyo jamaame degtay. ninkaan hadda ka hadlaya nayroobi waxa uu ka soo jeeda gobalka Mudug maantana dhul uuna shaqo ku lahayn ayuu rabaa inuu af ku yeesho ayay yiraahdeen labadaas masuul.
Muqtaar Muumin waxuu intaa ku daray: tan iyo dagaalkii sokeeya ee uu isriixriixu ka jiray gobalka Jubadda hoose wali gacantayada kama bixin magaalada jammaame iyo agagaarkeeda oo waxaa difaacanayay dadka udhashay ee biyo maal, shiilkhaalna waxaan deris kunahay deegaanka jilib waxaana naga dhexeya derisnimo wadaag, hadalka kasoo yeeray lugadheerana waa isku dir iyo inuu ummaddaas dhexdhigo colaad iyo muran deegaan ayuu yiri.
Waxaa maalintii shalay hadal kasoo saaray magaalada nayroobi Cabdiqaadir lugadheere oo ah siyaasi udhashay beesha shiikhaal kaasoo uu kusheeganayo inay beeshiisu ugu badantahay degaanada Jilib iyo jamaame islamarkaana ay dagaal kula jiraan wax ugu yeeray kooxa kasoo duulay gobalka galgaduud.
"Qabiilkaygu waa Leelkase, Laba Gabdhood oo Dhalay ayaan siinayaa Cidda Lagu Tilmaamo Nasab Dhimanka"
Sidaas waxaa yiri C/Raxman Shiikh oo caawa ka hadlayey kulan diimeedkii saddexaad ee Soomaalida Woqooyiga Ameerika.. Guji